FAQ - शेन्ज़ेन Byland क्यान प्याकेजिंग कं, लिमिटेड
म मेरो अर्डर राख्न तयार छु। मेरो अर्को चरण के हो?
अर्डर गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्।
१.8686 ०7555-8454550०6१ at मा बिक्री कार्यालय कल गर्नुहोस्।
२. ईमेल वा व्हाट्सएप बिक्रेता।
T. टिन अर्डर फारामहरू, पूर्ण रूपमा भर्नुहोस् र हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् বিক্রয়@bylandcan.com।
तपाइँ कुन भुक्तानी फारमहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ?
T / T, वेस्टर्न यूनियन, L / C वा अग्रिम मा चेक गर्नुहोस् यदि खाता स्थापित छैन।
स्टक टिन्सका लागि न्यूनतम अर्डर के हो?
500 कुल टिनहरू, प्रत्येक वस्तुको पूर्ण केस जुन मुद्रण बिना सादा डिब्बाको लागि चयन गरिएको छ।
कस्टम टिनको लागि न्यूनतम अर्डर के हो?
टिनको आकार र आकारमा निर्भर गर्दै परिमाण सीमा 5,000००० - २,000,००० टुक्रा हुन्छ। वस्तुहरूलाई नयाँ उपकरण चाहिन्छ ठूलो न्यूनतम र लामो लिड-टाइमको आवश्यक पर्दछ। कृपया हामीलाई कस्टम टिन अनुसन्धान पूरा गर्नुहोस् वा हाम्रो न्यूनतम अर्डरहरूमा विशेष जानकारीको लागि बिक्री प्रतिनिधिलाई कल गर्नुहोस्। कृपया तपाईंको विशिष्ट सोधपुछको सम्बन्धमा विवरणहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
हामी यसमा हाम्रो नामको साथ अनुकूलन गर्न चाहन्छौं। के यो त्यस्तो चीज हो जुन भूमिले प्रदान गर्न सक्छ?
हो। भूमि द्वारा राज्यमा अत्याधुनिक color र ,्ग प्रिन्टिंग लाइन प्रयोग गरी धातु, इन-हाउसमा अनुकूलन लिथोग्राफी प्रिन्ट गर्न सक्छ। चरणहरू मार्फत ग्राहकहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्न हामीसँग पूर्ण एकीकृत कला सेवाहरू र प्रेप्रेस विभाग छ। हामीसँग थोरै परिमाणहरूको लागि डिजिटल मुद्रण क्षमताहरू पनि छन्।
मलाई तपाईको स्टक साइज भन्दा थोरै लम्बाई / ठूलो गर्न सक्दछ। के यो गर्न सजिलो छ?
टिनको निर्माणमा निर्भर गर्दै हामी अनुकूलन अर्डरको लागि अवस्थित टुलि withको साथ सजिलैसँग गोल र फेन्सी आकारको टिनहरूको उचाइ परिमार्जन गर्न सक्दछौं। सिमलेस वा तानिएको टिनहरूलाई कुनै पनि आकार समायोजनको लागि नयाँ टुलि .को आवश्यकता पर्दछ। हामी लगातार नयाँ प्रविधिको लगानी गर्दै छौं र हाम्रा ग्राहकहरूको लागि थप विकल्पहरू प्रदान गर्नेछौं।
हामी अनुकूलन आकारको टिन चाहन्छौं। के बाइल्याण्डले १००% कस्टम टिन आकार र आकारहरू उत्पादन गर्न सक्छ?
बाइल्याण्ड क्यानको ईन्जिनियरि team टोलीले घरेलु बिरूवालाई दिइने समय र स्वचालित उत्पादनको सुविधाका लागि आवश्यक लगानीको लागि नयाँ आकार डिजाइन गर्न सक्दछ। हामी विदेशका सुविधाहरूबाट नयाँ वस्तुहरू पनि स्रोतमा सिर्जना गर्दछौं जब यो ग्राहकको लागि उत्तम समाधान हो भूमिबाट यस परियोजनाको मूल्या evalu्कन गर्न सकिन्छ एक उचित मूल्यमा उच्च गुणवत्ताको उत्पादनको बिमा गर्ने उत्तम तरिका निर्धारण गर्न।
कस्टम टिनको लागि तपाईंको मानक नेतृत्व समय कुन हो?
3-5 सप्ताह अवस्थित उपकरण र तपाईंको कलाकृति संग। एक छत अन्तर्गत सबै प्रक्रियाहरूसँग अवधारणादेखि पूरा हुनका लागि, हामी नियन्त्रणको साथै लचिलोपन र हाम्रा ग्राहकहरूको लागि समयमै वितरण गर्न सक्दछौं।
म कसरी चाँडो म छुट्टिहरूमा मेरो कस्टम टिन्स प्राप्त गर्नेछु भनेर निश्चित हुन आदेश दिनुपर्दछ?
हामी तपाईंलाई सकेसम्म धेरै योजना बनाउन प्रोत्साहित गर्दछौं। सञ्चार कुञ्जी हो! यदि त्यहाँ म्यादहरू छन् जुन अनुकूलन अर्डरको लागि पूरा गर्न आवश्यक छ भने, हाम्रो बिक्री प्रतिनिधिलाई समय सीमा थाहा दिनुहोस्। हामी डेलिभरी मितिबाट फिर्ता काम गर्न सक्दछौं र खरीद आदेश, कलाकृति र प्रमाण स्वीकृति को प्राप्तिको लागि समयरेखा प्रदान गर्न सक्दछौं। सबै अनुकूलन प्रोजेक्टहरूको रूपमा, परिवर्तनहरूले तपाईंको अर्डरको अन्तिम ढुवानीमा ढिलाइ गर्न सक्दछ। हालको नेतृत्व समयका लागि हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् वा ०75755-8454550०6१ call कल गर्नुहोस् र बिक्री प्रतिनिधिसँग कुरा गर्नुहोस्।
के टिन्स खाना उत्पादनहरूका लागि सुरक्षित छन्? के हामी टिनहरू खाना सुरक्षित छन् भनेर चिठी पाउन सक्छु?
सजावटी tins खाद्य उत्पादनहरु को लागी एक स्वीकार्य प्याकेज हो। हामी ती उत्पादनहरूका लागि आन्तरिक कोटिंग्स सिफारिश गर्न सक्दछौं जुन अम्लीय वा पानीमा आधारित छ। हामी एफडीए अनुमोदित मसी र कोटिंग प्रयोग गर्दछौं र हाम्रो आपूर्तिकर्ताबाट कागजात प्रदान गर्न सक्दछौं। हामी धेरै फार्च्युन customers०० ग्राहकहरु द्वारा वार्षिक रुपमा अडिट हुन्छौं र खाद्य सम्पर्क प्याकेजि manufacturers निर्माताहरुका लागि उच्च मापदण्डहरु पूरा गर्न प्रमाणित हुन्छौं। हाम्रो सबै सुविधाहरू सुरक्षित गुणवत्ता खाद्य संस्थान द्वारा SQF2 प्रमाणित छन्।
स्टक tins को लागी तपाइँको नेतृत्व समय के हो?
२- weeks हप्ता तपाइँको अर्डरको समयमा मौसम र उपलब्धतामा निर्भर गर्दछ। सबै विशेष आईटमहरूको लागि एक सही वर्ष-दौर स्टक प्रोग्रामको लागि प्रतिबद्ध हुँदै, हामी प्राय: हाम्रो भनिएको नेतृत्व-समय भन्दा राम्रो गर्छौं।
वसन्त फेस्टिवलको लागि मैले मेरो अर्डर समयमै प्राप्त गर्नेछु भनेर निश्चिन्त हुन मैले कत्ति चाँडो आदेश गर्नु पर्छ र मेरो सबै टिनहरू प्राप्त गर्नेछु?
हामी तपाइँलाई जाडो छुट्टीको मौसममा अर्डर गर्न प्रोत्साहित गर्दछौं। जे होस्, यदि तपाइँ गर्मी को अन्त्यमा अर्डर छैन भने, यसको मतलब यो छैन कि तपाइँ तपाइँको tins प्राप्त गर्दैन। हामी हाम्रो फ्लोर स्टक लगातार भर्न काम गर्दछौं। विशिष्ट ईन्भेन्टरी ईमेलको बारेमा जानकारीको लागि वा ०75755-8454550०6१ Call कल गर्नुहोस्।
शिपिंग र फ्रेट
तपाईं कसरी जहाज गर्नुहुन्छ र भाडा लागत कस्तो हुनेछ?
Byland साधारण वाहक (LTL / TL) मार्फत ढुवानी गर्न सकिन्छ। हामी यूपीएस, डीएचएल र फेडेक्स मार्फत पनि पठाउछौं जब हाम्रा ग्राहकहरू द्वारा अनुरोध गरिएको भए पनि यो उत्तम विकल्प होईन।
तपाईं किन अर्को दिन बाहिर पठाउन सक्नुहुन्न?
Byland Can Co सामान्यतया अर्को दिन बाहिर पठाउन सक्दैन वर्तमान शिपिंग तालिकाको कारण। Byland क्यान सामान्य नेतृत्व समय2हप्ता छ। हामी, सम्भव भएमा, चाँडै नै बाहिर पठाउन कोशिस गर्नेछौं यदि स्टक उपलब्ध छ र शिपिंग तालिकाले अनुमति दिन्छ भने। केहि केसहरूमा हाम्रा वितरकहरू अधिक छिटो बाहिर पठाउन सक्छन्।
हामीले क्यानलाई बिग्रिएको छ। यो निर्माण क्षति देखिन्छ। हामीले के गर्नुपर्छ?
यदि तपाईंले क्यानहरू प्राप्त गर्नुभयो जुन तपाईंलाई लाग्ने विफलता हो भने, निम्न चरणहरू लिनुहोस्।
१. तपाईको बिक्री प्रतिनिधिलाई कल गर्नुहोस्।
२. टिनको नमूनाहरू पठाउनुहोस्। यी विश्लेषणका लागि हाम्रो QA विभागमा देखाइनेछ।
Once. हाम्रो QA विभागले क्षतिको छानबिन गरेपछि, तपाईंको बिक्री प्रतिनिधिले निष्कर्षहरू छलफल गर्न कल गर्नेछन्।
यो माल ढुवानी क्षति देखिन्छ। हामीले के गर्नुपर्छ?
यदि तपाईंले क्यानहरू प्राप्त गर्नुभएको छ जुन तपाईंलाई ढुवानीमा क्षति भएको छ भने, निम्न चरणहरू लिनुहोस्।
१. सबै क्षतिहरूको नोटहरू सीधा बिलि Ladको बिलमा वा क्षतिको रूपमा UPS वा FEDEX मा बनाउनुहोस्। यदि तपाईंले यी नोटहरू बनाउनु भएन भने तपाईं क्षतिको लागि दावी राख्न सक्नुहुन्न।
२. दावी गर्नको लागि डेलिभर क्यारियर कल गर्नुहोस्। तीनीहरूले तपाईंलाई दाबी फारामको प्रतिलिपि फ्याक्स गर्नुपर्नेछ र भर्नुहोस्।
मैले आदेश गरेको सबै क्यानहरू प्राप्त भएन। के म पछि शिपमेंटमा आराम लिन लागिरहेको छु?
वर्षको समयमा निर्भर गर्दछ, तपाइँले अर्डर गर्नुभएको सबै डिजाइन वा आकारहरू स्टकमा नहुन सक्छ। यदि तपाइँ तपाइँको अर्डर मा सबै tins प्राप्त गर्नुभएन:
१. प्याला सूची सुन्नुहोस् कि टिनहरू फेरि अर्डर गरिएको छ कि भनेर हेर्नका लागि।
२. यदि हराएको आईटमहरू फिर्ता अर्डर गरिएको छ भने, बाँकी टिनहरू तपाईंलाई उपलब्ध हुने बित्तिकै तपाईंलाई पठाइनेछ। यदि तपाईं फिर्ता अर्डर गरिएका टिनहरू प्राप्त गर्न चाहानु हुन्न भने, तपाईंले शेष रद्द गर्न तपाईंको बिक्री प्रतिनिधिलाई कल गर्नुपर्नेछ।
The. यदि प्याकिंग सूचीले यी चीजहरूलाई फिर्ताको आदेश देखाएन भने, तपाइँको बिक्री प्रतिनिधिलाई कल गर्नुहोस् र तपाइँले किन तपाइँको पूरा अर्डर प्राप्त गर्नुभएको छैन भनेर पत्ता लगाउन उनीहरू खुसी हुनेछन्।
कुन राम्रो कलेक्ट वा प्रि-पेड फ्रेट हो?
तल पूर्व-भुक्तान गरिएको र लिपि सments्कलन बीचका भिन्नताहरू छन्।
१. शिपमेन्टहरू स Collect्कलन गर्नुहोस्: माल ढुवानीको लागि भुक्तान गरिएको छ जब माल ढुवानी गरिन्छ। तपाईंको अर्डर अनलोड गर्नु अघि ड्राइभरलाई एउटा चेक दिन आवश्यक पर्दछ।
२. पूर्व भुक्तान गरिएको भाडा: बाइल्यान्ड क्यान कम्पनीले तपाईंको इनभ्वाइसमा भाँडाकुँडाको सामान थप गर्नेछ। अर्डरमा त्यहाँ ह्यान्डलिंग शुल्क लागू गरिएको छ।
By. बाइल्यान्डले दुबै जहाजहरू संकलन गर्न र प्रि-पेड फ्रेट एफओबी फैक्ट्रीमा अपवाद बिना नै गर्न सक्छ।
FOB को मतलब के हो?
एफओबीको अर्थ फ्रेट अन बोर्ड हो। यसको मतलव फ्रेट ग्राहकको सम्पत्ति हुन्छ जब यो एफओबी पोइन्ट छोड्छ। फ्रेट क्षतिको लागि सबै दावीहरू कुनै अपवाद बिना डेलिभरी क्यारियरले भरिएको हुनुपर्दछ।
के तपाईं सिड जहाज गर्नुहुन्छ?
भूमिबाट सीओडी पठाउन सक्दैन।